iOS 11 inogamuchira yakawedzera chokwadi nemaoko akazaruka: ARKit | IPhone nhau
Apple inopa kumonyoroka kune yakawedzera chokwadi muIOS 11
Yakawedzera chokwadi chiri kwese kwese. Muenzaniso weizvi waizivikanwa Pokemon Go, iyo yaitsigirwa kwazvo neapuro hombe uye yakawana data rakakosha kwazvo muApp Store. Muhurukuro iyo yatiri kugara kuWWDC, chokwadi chakawedzerwa chinova chakakosha muIOS 11. Uku ndiko kukosha uko Apple iri kupa kuchinhu chakawedzera (AR) icho chakaburitsa a yekuvandudza kit yakanangana neiyi tekinoroji iri kuwedzera: ARKit. Mhedzisiro yacho inogona kutishamisa: iyo muenzaniso wekushandisa kweiyo kit yave ichishamisa uye chishamiso chaicho.
iOS 11 uye ARKit: Apple inogona kuve yepasi rose AR chikuva
Pfungwa iyo Apple yakatitumira kwatiri yeakawedzera chokwadi yakati siyanei zvishoma nezvatakange tiinazvo kusvika zvino. Izvo zvakaratidza kuti kune mamirioni evashandisi vane iDevice, uye kuti iyo chokwadi chakawedzerwa chinofanira kuwanikwa kune wese munhu. Saka, sezvo isu tatoziva kuti Apple yakaita sei pazvinhu izvi, inoisa huru yekuvandudza kit kune vanogadzira kuti vauye neAR kuzvishandiso zvavo.
Mumuedzo wakaitwa mune yakakosha takaona kuti pamusoro petafura sei Yakatumirwa kurwa nehipipasi, zvaitaridzika semuvhi uyo kutamba kwaive kuchishanda kubva chero kona iyo iPad yakaiswa pairi mabvazuva ARKit inogona kupa pfungwa yezviitiko zvingaitwe naApple mumwedzi iri kuuya (pamwe neiyo iPhone 8 iri padyo nekona?).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inopa kumonyoroka kune yakawedzera chokwadi muIOS 11
iOS 11 inoenderanawo nezvinodiwa neiyo iPad nezvakawanda zvinoshanda